Tourism Crises & Destination Recovery: Idzva Rinofanira-Kuverenga Bhuku
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Tourism Crises & Destination Recovery: Idzva Rinofanira-Kuverenga Bhuku
Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Bhuku Idzva Rinofanira Kuverengwa
rakanyorwa David Beirman
Zvakakodzera kuti bhuku rinobata nyaya dzematambudziko nemamiriro ezvinhu akaipa anokanganisa kushanya riburitswe paHalloween. Nekudaro, sezvo kushanya kunotanga kupora kubva kuCOVID-19, izvi zvinotarisa pamapatya engozi, njodzi, uye mukana.
Semunyori webhuku rino hazvina kufanira kwandiri kuti ndiite mutongo pamusoro pemhando yebhuku iri.
Mutongo iwoyo wakachengeterwa vaverengi kana vatsoropodzi. Nekudaro, ini ndinogona kukuudza zvishoma nezve bhuku iri uye kukosha kwaro kuindasitiri yekufambisa.
Muchidimbu, bhuku rino ivhavha yemusoro wezvikamu zvakakosha zvenjodzi nematambudziko zvinokanganisa indasitiri yekushanya.
Kubva ipapo, ini ndinokurukura nzira dzinoshandiswa nemasangano ekutungamira kwekuenda uye mabhizinesi ekushanya kuti adzivise kuti zviitike kana kupindura kwavari kana vangorova.
Mapoka edambudziko ari mubhuku ndeaya:
Covid-19 Chitsauko chakareba kwazvo mubhuku
Hutano uye Pandemic matambudziko, pre COVID-19
Management uye Sevhisi kutadza (zvake zvinangwa)
Njodzi dzezvakatipoteredza uye Matambudziko
Bhizinesi rega rega rekushanya rinogona kuenderana nerimwe reaya madingindira uye tese tinogona kudzidza zvakawanda kubva pamabatiro akaita nzvimbo dzekushanya nemabhizinesi kumatambudziko aya.
Pamusoro pemadingindira ari pamusoro, zvitsauko zviviri zvekutanga zvinotarisa pakutsanangura njodzi, dambudziko uye kusimba pamwe chete nehurumende, masangano ezvekushanya pasi rose uye nzira dzechikamu chekushanya kunjodzi yekushanya, dambudziko uye kupora.
Madingindira anotaridzwa nezvidzidzo zvinopfuura makumi maviri (20-2 muchitsauko chega chega) kubva pasi rese. Sekunyora kwandakaita bhuku sebhuku pane mibvunzo yenhaurirano panoperera chitsauko chimwe nechimwe. Kunyange ichidzika kuvadzidzi veyunivhesiti ndakaita nepese pandinogona napo kuona kuti inonzwisisika nyore kune vese vaverengi uye kunyanya kune nyanzvi dzekushanya. Zvisinei, kuverenga nguva yokurara hakusi. Ndakatsvaga kutarisa pasi rose uye pazvinogoneka, sanganisira mamwe ematambudziko uye zvirongwa zvekudzoreredza izvo ini ndanga ndichitora chikamu zvakananga.
Iri bhuku ndiro rekutanga bhuku rine thematic nezve njodzi yekushanya, dambudziko uye kupora kubva pabasa raJoan Henderson 2007, Tourism Crises, Zvinokonzera, Migumisiro uye Management. Bhuku raProfessor Henderson rakanga rakanaka uye rakandikurudzira. Nekudaro, ndine chokwadi chekuti angabvuma, zvakawanda zvakaitika mukushanya kubva 2007 uye COVID-19, iyo yandinofukidza zvakanyanya, ndiro dambudziko guru uye dambudziko, nyanzvi dzekushanya nevadzidzisi vakasangana nazvo muhupenyu hwedu.
Ona tsanangudzo pano. Iri bhuku rakadhindwa neSage Publishing (London) uye richave riripo pasi rose kubva Gumiguru 30 (yakakodzera Halloween kuburitswa zuva). Ndinovimba unonakidzwa nebhuku racho asi usanyara kundiudza kuti hauna kurifarira uye nei. Ndiri kushanda pane rimwe bhuku saka mazano anovaka anogamuchirwa nguva dzose.